Intshayelelo kwishishini - iFujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Njengenkampani ye-Sino-foreign sci-tech ehlanganyelweyo e-China egxile kwi-R & D, ukuveliswa kunye nokuhanjiswa kwe-algae hydrocolloids, iFujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd. kwiimarike.
Ngokwamkela ulwandle olusuka eIndonesia nase China njengezinto ezisetyenziswayo, iFujian Global Ocean ixhomekeke kubuchwepheshe bayo bokuqhubekeka phambili kunye netekhnoloji yokuphucula imveliso ukuvelisa yonke imveliso enomgangatho ophezulu; iimveliso zethu eziphambili kukutya kwe-agar, i-agar ye-bacteriological, i-agar enyibilikayo yangoku, i-carrageenan, i-agaro-oligosaccharide kunye neemveliso zayo ezihlanganisiweyo, amandla emveliso apheleleyo ngonyaka anokufikelela kwiitoni ezingama-3000. Iimveliso zethu zigunyaziswe yi-ISO, HALAL kunye neKOSHER, nazo ziyakwazi ukuhlangabezana nemigangatho yelizwe laseChina kunye nemigangatho ye-EU, kwaye zithengiswa kakuhle kulo lonke elaseTshayina zithunyelwa kwimimandla esempuma mpuma yeAsia, yaseYurophu naseMelika, njl.
Njengesitshixo kwishishini lokubonisa i-biotechnology elwandle e-China, i-Fujian Global Ocean iye yaqhuba kwaye yasungula intsebenziswano ebanzi kunye nobunzulu kunye notshintshiselwano kunye neziko lophando lwenzululwazi kunye namaziko emfundo ephezulu ekhaya nakumazwe aphesheya; imveliso yawo yobungcali kunye nentengiso yamanye amazwe ishiya inkampani iphumelela ukuncoma abathengi kunye nokuqonda rhoqo.
Ngokulandela imeko yoxanduva kwezentlalo, ukugcina ukufezekisa izinto ezintsha kunye nokufika, kunye nokusukela eyona nkonzo ilungileyo kunye nenkonzo egqibeleleyo, iFujian Global Ocean izinikele ekunikezeleni abathengi ekhaya nakumazwe aphesheya iimveliso ezikhuselekileyo, ezisempilweni nezisemgangathweni kunye neenkonzo.